धनुषा Archives - Lokpati.com
Tag - धनुषा
धनुषा घटनामा बाबुछोराको ज्यान गयो
धनुषा, २८ मंसिर। धनुषामा भएको बम विस्फोटमा परी बाबुछोराको मृत्यु भएको छ। छिरेश्वर नगरपालिका ५ महेन्द्रनगर बजारमा बम विष्फोट हुँदा महेन्द्रनगरका राजेश्वर साह र उनका छोरा आनन्द साहको मृत्युको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक...
करेन्ट लागेर बाबुछोराको मृत्यु
धनुषा, ११ साउन। धनुषामा करेन्ट लागेर बाबुछोराको ज्यान गएको छ। कमला नगरपालिका १ मंगराहाका ४५ वर्षीय राजेन्द्र मण्डल र उनका २२ वर्षीय छोरा धमेन्द्र मण्डलको शुक्रबार बेलुका करेन्ट लागेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।
शिक्षक अधिकारीमाथि सिरिञ्ज आक्रमण
धनुषा, २० असार । काठमाडौंमा सिरिञ्ज जस्तो तिखो वस्तु आक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला यस्तै प्रकृतिको घटना बिहीबार धनुषामा पनि गराइएको छ।
विद्यालय गइरहेका शिक्षक मदन अधिकारीलाई अज्ञात व्यक्तिले तिखो वस्तुले घोचेर फरार भएका...
तलब नपाएपछि शिक्षकले गरे ‘पेन डाउन’
जनकपुरधाम, १२ असार । धनुषाको विदेह नगरपालिका ६ गिद्धास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकसँगै विद्यार्थी पनि आन्दोलित बनेका छन्।
बुधबार आन्दोलनकारीले हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध पारेर त्यहाँका मेयर बेचन दासविरुद्ध नाराबाजी...
जबरजस्ती करणीको अभियोगमा अली पक्राउ
धनुषा, २२ वैशाख। मिथिला नगरपालिका ११ लोटा बस्ने ४० वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पर्सा, बीरगंज महानगरपालिका ३२ बस्ने ३५ वर्षीय फिरोज अलीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ।
शारीरिक रुपमा अशक्त महिलालाई उपचार...
धनुषामा भीषण हावाहुरी
धनुषा, १५ वैशाख । आइतबार बिहान आएको भीषण हावाहुरीले धनुषामा वितण्डा मच्चाएको छ । हावाहुरीले जनकपुरसहित जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बिजुलीको पोल, टहरा, रुख भत्काएको छ । यस्तै ग्रामिण भेगमा बालिनालीलाई समेत क्षति र्पुयाएको छ...
मेडिकल कलेजमा लापरवाही, प्रवेश परीक्षाबिनै ३४ भारतीय विद्यार्थी भर्ना
काठमाडौं, ४ पुस । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई ढाँटेर ३४ भारतीय विद्यार्थीलाई एमबीबीएसमा भर्ना गरेको खुलेको छ । पहिलो वर्षको परीक्षाका लागि आईओएममा फर्म पुगेपछि ती भारतीय...
धनुषा, ४ मंसिर । प्रदेश नं २ सरकारले पैगम्बर मोहम्मदको जन्म दिन मंसिर ५ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । सो प्रदेशका आठवटै जिल्लामा उक्त दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा जारी...
ओलीले बालुवाटार छाड्ने बेलामा मुलुक ध्वस्त पार्न सक्छन् : माधव नेपाल
४ सय जना कोरोना संक्रमणमुक्त : आज कति संक्रमित थपिए ?
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा : हेर्दाहेर्दैमा राखियो
ओलीजी, तपाईको उल्टो खोपडी देखेर दया लाग्छ : प्रचण्ड
जलविद्युतबाहेक सबै उपसूचक बढे, सवा ६ अर्ब बढिको कारोबार
संसद पुनर्स्थापनाको माग प्रतिगमन हो : गृहमन्त्री थापा
माघ १६ गते काठमाडौंमा विशाल जनसभा
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद् विघटनको सिफारिस गरेको खुलासा
काे हुन् संसारका सबैभन्दा धनी एलन मस्क ? (जीवनीसहित)
नेकपाले सोध्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टिकरण